Marki uu wax helay Maxamuud isma badlin mana noqon mid illaawo asxaabta, qaraabada iyo dhalinta bayhoofka ah. Waxaa uu ii sheegay Yaxye Aden Shire inuu marar badan oo uu aad oogu baahnaa kaalmo si lama filaan ah Maxamuud ooga fujiyay. Waxaa uu yiri Yaxye "Sebtember 2011-ki ayuu isoo wacay innagoo muddo is moogayn. Maalinta uu isoo wacayo waxaan ahaa shaqo la'aan waxaa umul ii ahayd xaaska oo ii curatay. waxay iga maraysay meel adag. Wuxuu igu yiri $250 ka qaato xawilaadda, Manderana tag oo howl yar iiga soo qabo. Qalbiga ayaan iska iri Riximka ayaa soo diray." Yaxye waxaa u yiri mar kale "Maxamuud waxaad moodaa inuu ogyahay maalinta aan kaalmo u baahanahay. Mar kale ayuu isoo wacay sanadki 2013-ki anigoo si gardarro ah shaqo aan hayay la iiga cayriyay. inaan shaqada waayay waxaa iiga darnaa si xun ayaa ugu foorjoobay oo ciil iyo caro ayaan la seexan waayay. Maxamuud marki uu isoo wacay waxaa uu yiri shaqo noocaas ah ayaan ku hayaa ee aad. Waxaan is iri tolow ayaa ogaysiiyo maalinta aad shaqo la'aan noqoto".
Allaha u raxmadee sheekhu maahayn mid ku nool hawadiisa iyo hawaawi balse wuxuu ahaa qof yaqaa…